2013 June : Oromo Democratic Front
Maalummaa Mirga Hiree Ofii Ofiin Murteeffannaa fi Mirga Hiree Murteeffannaa irratti Ejjennaa ADO
Posted by ODF on June 26, 2013 · Leave a Comment
Yaadni Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu jedhu, sabni tokko akka sabaatti egeree jireenya isaa karaa siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa akka isaa ta’utti utubachuudhaaf mirga inni qabu agarsiisa. Mirgi Hiree Murteeffannaa hojiitti yeroo hiikamu, mootummaa ofii qofaatti dhaabbachuu irraa ka’ee amma saba biraa wajjin guutummaatti wol makanii jiraachuu filachuutti deemuu danda’a. Hiika mirga Hiree Murteeffannaa keessatti iddoo guddaa kan qabu “yaadichi yeroo hojiitti hiikamu xumurri isaa maalii?” kan jedhu osoo hin ta’iin, sabi tokko jireenya isaaf ta’u murteeffachuuf filmaata adda addaa qabaachuu isaati.
RBO – June 2013
Posted by ODF on June 20, 2013 · Leave a Comment
Here you will find Radio bilisummaa Oromoo programing from June. It covers the Foundation of ODF and stances it takes on different issues concerning the Oromo.
RBO – May 2013
Here you will find Radio bilisummaa Oromoo programing from May. It covers the Foundation of ODF and stances it takes on different issues concerning the Oromo.
Tokkummaa Itoophiyaa ilaalchissee Ergaa Gulaalaa Imaammata ADO
Posted by ODF on June 19, 2013 · Leave a Comment
Waggoota jaatamman darbanii kaasee amma ammaatti falmii siyaasaa Impaayera Itoophiyaa keessatti geggeffamaa jiruuf hundeen “Tokkummaa” Itoophiyaa kan ilaalu akka ta’ee hubatamaa dha. Dhimmi “tokkummaa” Itoophiyaa ilaalu hundee falmii siyaasa biyyiittii keessatti adeemsifamaa turee fi har’as adeemsifamaa jiruu akka ta’e hubachuun, maalummaa Itoophiyaa agarsiisuu irra darbee rakkoowwan siyaasaa, hawaasummaa fi diinagdee biyyaatii xaxanii jiraniif furmaata hundee qabu barabaaduudhaaf, akkasumas egeree ummattoota biyyattii keessa jiraatanii fi haariiroo waliin qaban bu’ura harayaa irraatti ijaarudhaaf gargaara.
Adda Demokiratawaa Oromoon yaamamee Munich German keessatti kan gaggeeffame walgahii Miseensota, Deeggarrtootaa fi hawaasa Oromoo milkiin xumuramuu isaa oduun achii nu ga’e addeesse. Walgahii kana irrattis miseensotnii fi deeggartootni Adda Dimokiratawaa Oromoo biyyoota Awurophaa adda addaa, kan akka Norway, Swizerland, Holland, England, Sweeden, France fi magaalota German adda addaa irraa dhufanii kan qooda fudhatan yoo ta’u Hawaasni Oromoo Magaalaa Munich fi naannoo isaa jiraatanis baayyinaan argamanii walgahii kana irraa qooda fudhataniiru.
Qabsoo karaa nagaa filachuun, mala qabsoo yeroon gaafatuuti!
Posted by ODF on June 12, 2013 · Leave a Comment
Lolli, wal dhabbiin, mormii fi bortaan walitti bu’uun jireenya ilma namaa keessatti kan ture garafuulduraa illee kanuma jiraatuu dha. Haalli kun sadarkaa jireenya nam tokkee irraa kaasee hanga sadarkaalee maatii, gurmuu, sabaa fi motummoolee gidduutti mul’achaa turan fuuldura ille hinuma jiraatu. Lollii fi wal dhabbiin kun tokko tokko ifatti mul’atu; kaan ammo dhoksaa fi garaa keessatti osoo walnyaatanii, yeroo eeggatanii gadi bahu. Hundee fi madda wal dhabbii sababoota ta’an keessa kan akka sirna gita bittaa fi bitamaa gidduu , addaa addummaa kaayyoo , aangoo fi bu’aa, ilaalchaa xalilawaa fi itti gala akeekaa sirritti walhubachuu dhabuu irraa shakkii keessa galuun sababoota…
Itoophiyaa akka Federeshinaatti caaseffammuu ilaalchisee Ergaa Gulaa Imaammata ADO
Posted by ODF on June 5, 2013 · Leave a Comment
Addi Demokratawaa Oromoo(ADO) ummanni Oromoo biyya isaa irratti abbaa, qabeenya isaa irratti abboomaa, jireennya isaa irratti murteessaa ta’ee saboota biyyattii hundaa waliin sirna mootummaa Federaalaa dhugaa, kan dimokiraasii, haqaan bulmaataa, fi wal qixxummaan keessatti dagaagu uumuu akeekkatee socho’a. Ejjannaan kunis tarkaanfii bara 1991 booddee Itoophiyaa gara federeshina sabootaatti caasessuudhaaf fudhatame ka’umsa godhachuu dhaani. Tarkaanfii qajeelaa kana keessatti ashaaraan ABO fi qabsaa’ota Oromoo kan warra hangafaa har’as akka aduu ganamaatti keessaa hanga’a. Kana irratti dabalees gaafa akka ammaa kana kan maqaa fi fakkeessaa ta’uun hafee dhugaan federeshina sab-daneessaatti itiopiyaan ijaaramtu empaayerummaan biyyattii akka raawwatu qabsa’ota Oromoo keessaa kanneen maman ni xiqqaatu.